डाक्टरहरू बिरामी जाँच्न छाडेर तलवका लागि आन्दोलित – इन्सेक
डाक्टरहरू बिरामी जाँच्न छाडेर तलवका लागि आन्दोलित
चितवन ०७३ पुस १८ गते
भरतपुरस्थित विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक र अन्य कर्मचारीहरू साउन महिनादेखि बढेको तलव र ग्रेड खान नपाएको भन्दै काम नै ठप्प पारेर बसेपछि पुस १८ गते अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको छ । विरोधका कारण सबैभन्दा बढी अप्रेशन सेवाका बिरामीहरू प्रभावित बनेका थिए ।
पुस महिनाको १५ गते सम्म तलव खुवाउने भन्दै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. प्रकाश न्यौपानेले भने पनि सो अनुसार नभएकाले काम छाडेर बस्नुपरेको डा. अनिलविक्रम कार्कीले बताए ।
चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्य प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीले काम ठप्प पारेपछि अध्यक्ष डा. न्यौपाने सोमबार नै जहाजबाट चितवन आइ कर्मचारीको गुनासो सुन्न अस्पताल पुगेका थिए । 'मैले सचिव र मन्त्री ज्यूलाई टिप्पणी उठाइसकेको छु, मन्त्रिपरिषद्को वैठक बसेलगत्तै कर्मचारीको तलव र अन्य सुविधाको समस्या हल हुन्छ ।'-अध्यक्ष डा. न्यौपानेले भने-'तलव खुवाउने काम बोर्ड वैठकबाट निर्णय गराउनु पर्ने हुन्छ । तर, अहिले बोर्ड सदस्य पूर्ण नहुनाले समस्या भएको हो ।'
अस्पतालको सेवा नै ठप्प पारेर विरोध हुन थालेपछि अध्यक्षले काममा अवरोध गर्नेलाई कारवाही गर्ने बताएका छन् । अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा काममा बाधा गरेमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही हुने नियम रहे पनि अस्पतालले हालसम्म कसैलाई पनि उचित कारवाही गर्न सकेको छैन ।